Welwel soo food saarey Shaqaalaha Kenya ee jooga Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Welwel soo food saarey Shaqaalaha Kenya ee jooga Soomaaliya
Madaxweyne Farmaajo ayaa doonaya inuu Kenya kusoo rogo xayiraad adag oo diblomaasiyadeed ah haddii ay sii wado faragelinta siyaasadeed ee doorashadda Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ugu yaraan 100,000 oo u dhashay Kenya, islamarkaana ka shaqeysta gudaha Soomaaliya ay halis ugu jiraan inay waayaan shaqooyinkooda haddii Farmaajo ku tilmaamo Kenya dal cadow ah.
“Madaxweyne Farmaajo wuxuu dhawaan ku dhawaaqi doonaa Kenya inay tahay cadow taasna waxay ka dhigan tahay in ka badan 100,000 oo shaqaale Kenyan ah inay si toos ah shaqadooda u waayaan,”ayuu yiri qof ku dhaw Villa Somalia, oo la hadlay KON.
Dowladda Kenya ayaa ku eedeysay Farmaajo inuu olole siyaasadeed u adeegsanayo xiisadda diblomaasiyadeed ee uu abuuray hadda, waxayna beenisay inay faragelin ku hayso arrimaha doorashooyinka dalka.
Farmaajo ayaa xannibay Qaadkii laga keeni jiray Kenya, wuxuuna fasaxay midka Itoobiya, oo si aad ah loo keeno, iyadoo dhawaana hay'adda socdaalka soo saartay qoraal ay ku sheegtay inay muwaadiniinta Kenya ee imaanaya Soomaaliya looga baahan yahay inay fiisaha kasoo qaataan Safaaradaha dibadda.
Mamnuucida dhoofinta Qaadka Miiraa ayaa dhaawacday nolosha kumanaan beeraley reer Kenya ah, kuwaasoo cadaadis ku saaraya Xukuumadda Nairobi inay la hadashay dowladda Soomaaliya oo la dhameeyo khilaafka taagan.
Sidoo kale, dadka wata baasaboorka diblomaasiga Kenya ayaa laga doonayaa inay ogolaansho kasoo qataan Wasaaradda Arrimaha dibadda kahor inta aysan dalka usoo safrin, waxaana tallaabadan loo arkay mid lagu colaadinayo dowladda Uhuru Kenyatta.
Muwaadiniinta Kenya ee jooga dalka waxay aad uga shaqeeyaan dhanka maqaayadaha, huteelladda casriga ah, Jaamacadaha iyo dhismaha, waxaana sii kordhayay tiradooda sanadihii dambe, maadama ay arkeen lacag badan oo wadankooda ku heli karin.